Aza mitafy 'maska ​​diso' amin'ny lamasinina Eurostar!
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Aza mitafy 'maska ​​diso' amin'ny lamasinina Eurostar!
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nesorin'ny polisy frantsay ny mpandeha anglisy tsy voafehy nitafy 'karazana sarontava' tamin'ny fiaran-dalamby Eurostar, nisambotra azy, taorian'ny fijanonana vonjy maika tany Lille.
Fiarandalamby Eurostar noterena hijanona vonjy maika any Lille, France noho ny mpandeha tsy manara-dalàna.
Ny mpandeha fiaran-dalamby britanika nesorina tamin'ny fiaran-dalamby, voasambotra taorian'ny fifandonana tamin'ny mpitantana lamasinina Eurostar.
Nanjary nahery setra sy nampatahotra ny ekipa tao anatiny ilay mpandeha, ka nantsoina ny polisy.
Noteren'ny polisy mitam-piadiana an-keriny ny mpandeha iray izay voarohirohy ho nanao 'karazana saron-tava' tamin'ny fiaran-dalamby Eurostar taorian'ny nijanonany tampoka tany Lille, France ny alakamisy alina.
The Fiaran-dalamby Eurostar dia nandeha avy tany Paris Gare du Nord nankany St. Pancras ny alakamisy tolakandro fa voatery nijanona tampoka tany Lille rehefa avy niady tamina mpivarotra britanika avy tany Grande-Bretagne. Liverpool saron-tava, raha ny filazan'ireo mpandeha fiaran-dalamby.
Taorian'ilay fifandonana dia nilaza ny mpitantana fa hampandre ny polisy any Lille izy ireo noho ny tsy fanarahany ny lalàna COVID-19, miaraka amina vonjy maika ny fiaran-dalamby, fijanonana tsy voalamina ao amin'ny gara izay naneren'ny polisy valo ny mpandeha.
Rehefa nandao ny fiaran-dalamby izy, ilay britanika, noheverina fa 40 taona teo ho eo, dia nilaza fa nampangaina ho “tsy nanao karazana sarontava” ary izao dia “havela irery any Frantsa”, ary niantso azy io ho “fitsaboana tena masiaka.”
Mpitondrateny iray Eurostar niaro ny valin'ny toe-javatra, tamin'ny filazany fa "nanjary mahery setra sy nampihorohoro ny ekipa tao anaty fiaramanidina ny mpandeha" rehefa nampahatsiahivin'izy ireo ny fanjakan'izy ireo momba ny fanaovana saron-tava ary, vokatr'izany dia "nangatahana hiala ny fiaran-dalamby tao amin'ny gara Lille izy . ” Nifanaraka tamin'ny “fomba fanao mahazatra” an'ny orinasa dia nantsoina “hanatrika sy hanampy” izy ireo.
Nanamafy ny polisy frantsay fa voasambotra ny lehilahy noho ny zava-niseho teny amin'ny fiaran-dalamby saingy tsy nanome fanavaozana hafa momba izany.
Eurostar dia nilaza tao amin'ny tranonkalany fa ny mpandeha rehetra dia tsy maintsy mitafy tarehy amin'ny fiaran-dalambiny, na dia vita vaksiny tanteraka aza, miaraka amin'ireo izay tsy manaraka ny mety ho fandavana ny dia. Ny torolàlana an'ny orinasa dia tsy milaza izay karazana saron-tava takiana, ny tsy maintsy manarona ny vava sy ny oron'ny mpandeha fotsiny.